SmartDocs: Maamul Keydinta Erayga Microsoft | Martech Zone
Inta badan kooxaha Suuqgeynta B2B waxay isu arkaan inay qorayaan soo jeedin (RFPs) iyo agab suuq geyn ah Microsoft Word in ka badan iyo in ka badan. Marka ganacsigaagu bilaabo inuu kobco, waxaad ogaatay inaad dukumiinti ku hayso goobta oo dhan. Waxaan u adeegsanaa Google Docs dukumiintiyadayada macmiilka iyo iskaashiga. Waxaan isticmaalnaa Santuuqa keydkeena soo jeedinta.
Tan iyo inta badan shirkadaha shirkaduhu waxay sii wadaan inay adeegsadaan Microsoft Word si loo qoro dukumiintigooda… ma jirto hab fudud oo looga faa'iideysan karo dukumiintiyadaas. SoddonSix Software waa shirkad goboleed oo dhowaan soo bandhigtay nidaamkooda keydka ee ku saleysan farsamada Microsoft ee Hubi - shir bille ah oo lagu iftiiminayo bilowga waaweyn ee gobolka.
Adeegsiga adeegyada Microsoft Sharepoint, soddonSix Software waxay soo saartay SmartDocs si ay uga jawaabto dhibaato gaar ah - laakiin aad u weyn. Shirkadaha waaweyn ee haysta dukumiintiyada dukumiintiga ah ma aysan helin qaab ay ku abaabulaan, ku helaan, oo si otomaatig ah ugu dhexgalaan dukumiintiyada adeegsiga kala duwan. Hadda waxay ku sameeyaan SmartDocs. SmartDocs waa maareyn maareyn iyo dib u isticmaal maad Microsoft Word.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee astaamaha SmartDocs:
Ka-faa'iideysiga horeyba u-qoray oo loo oggolaaday nuxurka si dhakhso leh loo abuuro cusub Microsoft Word dukumiintiyada.
Si fudud dib u isticmaal qoraalka, miisaska, sawirada, iyo jaantusyada guud ahaan Microsoft Word dukumiintiyada.
Adeegso qoraalka shuruudaysan si aad u abuurto kala duwanaansho badan oo wax soo saar ah oo ka socda hal dukumiinti Microsoft Word.
Ka tirtir waxyaabaha aan iswaafaqsanayn iyo waqtigii hore ee la socoshada ogeysiinta isbeddelka firfircoonida iyo cusbooneysiinta otomaatigga ah.
Ku shaqeeya dhaxal ahaan Microsoft Word dukumiinti. Looma baahna beddel dukumiinti.
Wuxuu ku dhex jiraa nidaam maamul dukumiinti kasta.
Sii wad inaad ku keydiso dukumiintiyadaada isla goobta aad maanta isticmaasho.
Qaar ka mid ah xubnaha dhagaystayaasha ayaa wax ka weydiiyay qorshayaasha shirkadda ee ah inay ka shaqeyso oo ay ku dhex milmaan barnaamijyada kale ee xafiisyada. Soddomex Software ayaa ku jawaabtay inaysan jiri doonin qorshooyin noocaas ah - nidaamka waxaa lagu qoray C #, oo loogu talagalay Sharepoint, wuxuuna si gaar ah ula shaqeeyaa Microsoft Word. Waxaan ku raacsanahay ThirtySix in tani ay tahay istiraatiijiyad aad u fiican - suuqa Microsoft waa mid aad u weyn oo kharashka iyo khasaaraha la xiriira dhoobada aragtidooda ay aad u badan tahay.
Booqo SoddonSix Software si aad u hesho macluumaad dheeraad ah ama muujinta barnaamijyadooda.
Tags: b2b sirdoonka macaamiishaqanacsanaanta macaamiisha b2bwarbixin funnelJesse Joogqiimaha noloshaLTVnacasnimo
Xiriiriyaha Quudinta Tooska ah ee WordPress